LR41: funda kabanzi mayelana nalawa maseli noma amabhethri | Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala
Isaka | 05/10/2021 08:39 | Izingxenye ze-elekthronikhi
Kukhona inani elikhulu amabhethri anama-voltage ahlukene, amakhono, futhi futhi nenqwaba yezinhlobo. Ngayinye iqondiswe ohlotsheni oluthile lwedivayisi. Enye yazo sesike sayihlaziya esikhathini esidlule, njengoba injalo i-CR2032. Manje, kule ndatshana, sizohlaziya "udade" walokhu, njengoba kunjalo i-LR41, nayo engeyamabhethri abizwa ngezinkinobho.
Izici zayo ziyenza ilungele izinhlobo ezithile ze- izinhlelo zokusebenza lapho usayizi nobude besikhathi, futhi nezimfuno zamandla zingaphakeme njengakwamanye amadivayisi amakhulu ...
1 Yini ibhethri le-LR41?
1.1 Ungawathenga kuphi amabhethri e-LR41
2 Okuningi ngamabhethri
2.1 Izinhlobo zebhethri
2.1.1 Ayikwazi ukugcwaliswa kabusha
Yini ibhethri le-LR41?
La ibhethri noma ibhethri le-LR41 Luhlobo lwebhethri emndenini wezinkinobho. Iphinde ibhekwe njenge-alkaline futhi ayikwazi ukugcwaliseka. Amandla ayo angama-1.5 volts, ngosayizi omncane ngokwanele wamadivayisi we-elekthronikhi adinga ukufunwa kwamandla aphansi, njengamawashi, izikhombi ze-laser, ama-calculator, namanye amadivayisi kagesi.
Ngokuphathelene nokwakheka kwamaseli abo, lolu hlobo lwamabhethri luyasetshenziswa amakhemikhali ahlukene ngokufundeka kwayo. Ngesikebhe sangaphandle sensimbi esigxobo sayo esihle ingxenye eyisicaba lapho imibhalo evame ukuba khona, nobuso obuhlukile kube yisigxobo esingesihle. Ngokuqondene nobude besikhathi, zingafinyelela eminyakeni engu-3 kwisitoreji.
Ungawathenga kuphi amabhethri e-LR41
Lezi zinhlobo zamabhethri ungazithola ezitolo eziningana ezikhethekile, yize kungelula kangako ukuzithola njengohlobo A, ezithandwa kakhulu. Noma kunjalo, kuzingxenyekazi ezifana ne-Amazon ungakwazi Thenga ngeyunithi ngayinye noma ngamaphakethe:
Iphakethe leMaxell lamabhethri ayi-10 atholakala nge-LR41
Iphakethe leCamelion lamayunithi ama-2 LR41
Iyunithi ye-Duracell 376/377 LR41
Kumelwe kube hlukanisa ibhethri nebhethri, yize imvamisa womabili la magama esetshenziswa ngokunganaki (isizathu igama elithi ibhethri esiNgisini, okuyindida futhi elisebenza kubo bobabili), uma ufuna ukuqina kakhulu, ungenza okulandelayo:
Ibhetri: ibhethri lingakwazi ukubuyisa ukushaja kwalo uma unikezwa amandla kagesi, okungukuthi, awekho amabhethri angakwazi ukugcwaliswa kabusha. Ngaphezu kwalokho, bahlupheka ngokwabo ezinsukwini noma ezinyangeni lapho bengasetshenziswa khona.
Pila: kwenziwa inqubo engalungiseki, futhi lapho zilandwa azikwazi ukulayishwa kabusha. Esikhundleni salokho, zingagcinwa iminyaka ngaphandle kokuzikhulula okukhulu.
Izitaki zingahlukaniswa zibe imindeni emibili emikhulu, futhi ngaphakathi kwazo zingabuye ziqhubeke zenziwe ikhathalogu ngokuya ngohlobo nezici zalo:
Ayikwazi ukugcwaliswa kabusha
I-Las amabhethri angagcwaliseki akufanele bazame ukulayisha, njengoba zingalimala, azenzelwanga lokho. Zenzelwe ukusetshenziswa okukodwa kuphela. Ngaphakathi kwaleli qembu kukhona:
Ukwakhiwa kwesakhiwo: zithandwa kakhulu, futhi yizo ongazithola kumawashi odonga, izilawuli kude, njll. Phakathi kwazo kukhona:
Okune-alikhali: zivame kakhulu namuhla. Zakhiwe nge-zinc njenge-anode ne-manganese dioxide njenge-cathode. Lolu hlobo lwebhethri luhlala isikhathi eside kakhulu, futhi kufanele lugcinwe cishe ku-25ºC noma ngaphansi ukulondolozwa okufanele. Ngokwezilinganiso, kukhona i-AA (LR6), i-AAA (LR03), i-AAAA (LR61), i-C (i-LR14), i-D (i-LR20), i-N (i-LR1) ne-A23 (i-8LR932), konke kungama-volts angu-1.5 nosayizi ohlukile , ngaphandle kweyokugcina eyi-12V.
Salinas: La mabhethri ane-zinc-carbon, futhi ayaqhubeka nokusetshenziswa ngenxa yamandla aphansi nobude bawo uma kuqhathaniswa nalawo ane-alikhali. Uzothola nezinhlobo ezifanayo, njenge-AA, i-AAA, i-AAAA, njll.
ILithium: Bafaka i-lithium ekwakhiweni kwabo, futhi kungaba nezinhlobo eziningana ngokuzikhulula okuphansi kakhulu, okungu-1% kuphela ngonyaka. Ngaphezu kwalokho, anebanga lokusebenza elibanzi kakhulu, kusuka ku -30ºC kuye ku-70ºC. Ngaphakathi ungathola i-lithium iron disulfide, efana ne-1.5v AA noma i-AAA, i-3.6v lithium-thionyl colouro, i-3v lithium manganese dioxide ...
Unxande: Njengoba igama labo liphakamisa, angamabhethri amise okonxande, ahlukile kulawo angama-cylindrical. Esikhathini esedlule zazithandwa kakhulu, yize namuhla zingasetshenziswanga kangako ngenxa yobukhulu bazo. Kulezi, izintambo ezingaphezulu kuka-4.5v zingafinyelelwa.
Okune-alikhali: lawo aziwa ngama-LR angaba kusuka ku-4.5v wepakethe yebhethri noma i-3LR12, kuye ku-9v ku-PP3 (6LR61), kudlule ku-6v webhethri lethoshi (4LR25).
Salinas: Njengakuma-cylindrical, nawo awasasebenzi futhi awasetshenziswa kakhulu, kuphela kuzinhlelo zokusebenza ezikhethekile lapho zingathola khona inzuzo kunezi-alkaline. Uthola abafana abanjengo-PP6 no-PP9 ...
ILithium: Kukhona namabhethri ayisikwele e-lithium, imvamisa ane-lithium thionyl chloride noma i-lithium manganese dioxide. Womabili la ma-9v.
Inkinobho: ngaphakathi kwalesi sigaba i-LR41 yale ndatshana izongena. Amabhethri okuthi, njengoba igama lawo liphakamisa, anjengezinkinobho. Zisetshenziselwa amadivayisi anesidingo esiphansi sikagesi nosayizi omncane, njengamawashi, izinsiza-kuzwa, njll.
Okune-alikhali: angamabhethri angu-1.5v, anamakhodi afana ne-LR54, LR44, LR43, LR41 ne-LR9.
ILithium: kukhona nezinye ezinama-voltages ka-3v. Ngokuphila okude okude futhi okwazi ukusebenza ebangeni lokushisa elibanzi kakhulu. Lawa mabhethri amakwe njenge-CR ye-lithium manganese dioxide ne-BR ye-lithium-polycarbonate monofluoride (i-lithium thionyl chloride nayo ikhona, yize iyingqayizivele, ine-3.6v nesikhathi sokuphila esingadlula iminyaka eyi-10, ngezicelo ezibucayi nekhodi ye-TL). Isibonelo, i-CR1025, CR1216, CR2032, BR2032, CR3032, njll. Zonke zinobukhulu obuhlukile.
Isiliva oxide: bangafika ku-1.55v futhi babe nokusebenza okuhle kakhulu okushisa okuphansi. Zihlukaniswa ngamakhodi we-SR, njenge-SR41, SR55, SR69, njll.
Amaseli omoya-zinc: zivame kakhulu ezindlekweni zokuzwa ngenxa yobukhulu bazo nokufakwa kwazo kalula. Ngamandla we-1.4 volts. Ikhodi yalo iyi-PR, njenge-PR70, PR41 ...
Amabhethri wekhamera: Ziyafana nezangaphambilini, futhi kukhona ne-lithium, kepha imvamisa iza ngokufakwa okukhethekile kwalawa madivayisi. Zinkulu ngosayizi, futhi zinganikezela ngama-voltages kusuka kuma-volts ama-3 kuye kwayi-6. Ngamakhodi we-CR kuleli cala. NjengeCR123A, CR2, 2CR5, CR-V3, njll.
Njengoba igama layo likhombisa, zingamabhethri, yize abaningi bethi amabhethri angavuseleleka (empeleni, angaba nefomethi efanayo futhi abukeke njengamabhethri angavuseleleki). Lezi zinhlobo zamabhethri azihloselwe ukusetshenziswa okukodwa, kepha zingasetshenziswa kaninginingi, ngemijikelezo eminingi yokukhipha imali. Okuvamile kakhulu yile:
Ungasebenzisi ishaja ye-NiCd noma i-NiMH ngamabhethri e-lithium, noma okuphambene nalokho. Okufanele kusetshenziswe esimweni ngasinye.
I-NiCd: Lawa mabhethri e-nickel-cadmium ayedume kakhulu, futhi asetshenziswa kancane nangaphansi ngenxa yemphumela yawo yememori. Okusho ukuthi, amandla ayo ancipha ngokusetshenziswa. Zingahlala cishe imijikelezo yokukhokha nokukhipha engaba ngu-2000, okuyisibalo esiphawuleka kakhulu.
I-NiMH: zithandwa kakhulu, futhi azinamphumela wokukhumbula okuningi njengangaphambili. Ngaphezu kwalokho, basekela ukuqina kwamandla aphezulu, nakho okuhle. Banesilinganiso sabo esikhulu sokuzikhipha kanye nejubane labo lokushaja eliphansi uma kuqhathaniswa ne-NiCd. Zibuye zizwele kakhulu ekushintsheni kokushisa. Zigcina phakathi kwemijikelezo yokukhipha imali engu-500 kuya ku-1200.
Li-ion: zisetshenziswa kakhulu namuhla kuzakhiwo zazo ezinhle. Zisekela ubukhulu bamandla aphakeme kwiseli ngayinye kune-NiCd ne-NiMH, ngakho-ke zingakhiwa zincane kakhulu futhi zingasindi. Umphumela wazo wokukhumbula cishe awunakwa, njengezinga labo lokuzikhipha, kepha banamaphuzu abuthakathaka, ngoba ukuqina kwabo akufinyeleli kumijikelezo ye-NiCd. Kulokhu, aphakathi kuka-400 no-1200 wemijikelezo yokukhipha imali.
Indlela ephelele ye-athikili: Izingxenyekazi zekhompyutha zamahhala » Izingxenye ze-elekthronikhi » LR41: funda kabanzi mayelana nalawa mabhethri